မေလ ၂၂ရက် PVTV ရဲ့ ညနေပိုင်း သတင်းအစီအစဉ်… – PVTV Myanmar
မေလ ၂၂ရက် PVTV ရဲ့ ညနေပိုင်း သတင်းအစီအစဉ်…
· 8 months ago ·23 Comments
မေလ ၂၂ရက် PVTV ရဲ့ ညနေပိုင်း သတင်းအစီအစဉ်
Like – 4.3K Share – 477
နေသင်းရေးသားတဲ့ “ကျေးဇူးပြုပေး” ဆိုတဲ့ အက်ဆေးကို ခံစားနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Zoland Voice TV ရဲ့ Awareness ကဏ္ဍက စစ်တပ်၏အရိပ်မိုးထားသော နိုင်ငံရေးစနစ်အကြောင်း ရှင်းပြထားတာကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
U Lay Gyi says:
2021-05-22 at 10:11 PM
U Myo Zarni Han says:
2021-05-22 at 10:13 PM
Arr Te says:
ကောင် လေး says:
2021-05-22 at 10:14 PM
ကယားပြည်နယ်ကို တင့်ကားတွေပါသုံးလာပါပီ အနီရောင်အဆင့် လို့လည်း သိရတယ် 𝖯𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗄 𝖮𝗎𝗍 လုပ်ပေးပါ‼️#SaveKayah #SaveMyanmar
Bhone Htet Paing says:
2021-05-22 at 10:16 PM
ဏင့်အဲ ဏင့်အဲ ဏင့်အဲ ဏင့်အဲ says:
Mc Boy Mcboy says:
2021-05-22 at 10:18 PM
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ တသက္လံုး ဘယ္ေတာ့မရဘူး လက္နက္ကိုင္ စစ္အာဏာရွင္ကို လက္နက္နဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္အဆံုးသတ္မွသာလွ်င္ ဒီမုိကေရစီရလိမ့္မယ့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္မွာေၾကာက္လို႔ စစ္အာဏာရွင္က်ရွံဳးေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ဘူး
San Wai says:
2021-05-22 at 10:27 PM
Yjkhi Yikhin says:
2021-05-22 at 10:29 PM
Kyaw Gyi says:
2021-05-22 at 10:34 PM
ဒုိျပည္သူအစုိးရ သတင္းေၾကျငာတာနားဝင္ကုိ ခ်ဳိေနတာပဲ
Myatbone Thantsin says:
2021-05-22 at 10:39 PM
Shwe La Wun says:
2021-05-22 at 10:40 PM
Thomas Mung Guite says:
2021-05-22 at 10:41 PM
လုံခြုံရေးတပ်လို့ မသုံးပါနဲ့၊ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လို့သာ သုံးစွဲသင့်ပါသည်။
Zarni Maung says:
2021-05-22 at 11:01 PM
အမာ နီ says:
2021-05-22 at 11:02 PM
2021-05-23 at 5:51 AM
Pyaythu Yaytu says:
2021-05-23 at 6:12 AM
Mi Maw May Ma says:
2021-05-23 at 7:46 AM
2021-05-23 at 12:22 PM
Lamyaw Wak says:
2021-05-23 at 12:42 PM
2021-05-23 at 6:08 PM
မိုး မင္းေလး says:
2021-05-23 at 6:10 PM
Khine Nandar says:
2021-05-23 at 8:27 PM
I watch PVTV everyday to keep abreast with developments and NUG’s activities. Thanks PVTV!
The Records of Military’s Crack Down4(22 May 2021)…
The Melody of Spring_Music Video (May 22/2021)